Maanta waa sanad-guuradii koowaad ee kiisaskii ugu horreeyay ee wanaagsan ee COVID-19 ee gobolka Iow | KWIT
Maanta waa sanad-guuradii koowaad ee kiisaskii ugu horreeyay ee wanaagsan ee COVID-19 ee gobolka Iow
By Halima Osman • Mar 8, 2021
Maanta waa sanad-guuradii koowaad ee kiisaskii ugu horreeyay ee wanaagsan ee COVID-19 ee gobolka Iowa. Tan iyo bilowgii Faafida, waxaa jiray 5,559 dhimasho, iyadoo 214 ay ku dhinteen Degmada Woodbury.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa ayaa diiwaangelisay hal dhimasho oo dheeraad ah sababo la xiriira dhibaatooyinka cudurka Isniinta iyadoo ku dhowaad 140 xaaladood oo wanaagsan laga helay, oo ay ku jiraan sideed ka tirsan Gobolka Woodbury.
(Heerka tijaabada ee 14-maalmood ee Gobolka Woodbury waa 6.1%. Taasi waa labo boqolkiiba dhibic ka sareysa celceliska gobolka oo dhan. Ku dhowaad laba toddobaad ka hor, heerka maxalliga wuxuu ahaa 4.7%.)
Waxaa jira ku dhowaad 170 isbitaal-dhigis gobolka oo dhan, oo leh 15 xarumaha Sioux City ee labada rug caafimaad ee waaweyn. Taasi waa kororka toddobada bukaan tan iyo jimcihii.
Rug caafimaad oo tallaal ah ayaa loo abaabulay Guriga Beesha ee Mary J. Treglia maalinta Arbacada ah ee soo socota, 7-da Maarso. Lambarka la wacayo si loo diiwaan geliyo waa (712) 258-5137. Waqtiga kama dambaysta ah ee isdiiwaangelintu waa 15-ka Maarso.
Guddoomiyaha Nebraska Pete Ricketts ayaa sheegay in gobolku raaci doono tilmaamaha cusub ee CDC ee ku xeeran tallaalka COVID-19 iyo isticmaalka maaskaro.
Wuxuu faallooyinkiisa ka dhiibtay maanta sidii uu u dhiirrigelin lahaa taxaddarka sii socda ee qorshaynta isu imaatinka qoyska ee fasaxa Easter-ka ee soo socda 4-ta Abriil.
CDC-da waxay sheegaysaa in dadka qaatay qiyaas labaad ay laqaadan karaan dadka kale iyagoon weji-qarsanayn haddii ay sugaan 14 maalmood waxtarka buuxa. Waxaa intaa dheer, dadka si buuxda u tallaalan uma baahna inay karantiil ka baxaan haddii ay ku dhacaan qof baaray fayraska.
Warka waxaa kuu keenaya Seaboard Triumph Foods oo ku taal Sioux City Iowa, iyadoo si sharaf leh u taageeraysa bulshada Siouxland ilaa iyo 2017. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Seaboard Triumph Foods fadlan booqo Sioux City Pork Dot Com.
War weyn oo dhaqaale oo ku xeeran bartamaha magaalada Sioux City. Ho-Chunk Capital maanta waxay dham
By Halima Osman • Mar 5, 2021
War weyn oo dhaqaale oo ku xeeran bartamaha magaalada Sioux City. Ho-Chunk Capital maanta waxay dhameystirtay iibsashada dhowr meheradood oo ku yaal Waddada Afaraad ee Taariikhda ee qoysaska Aalfs. Tan waxaa ka mid ah dhismaha xafiiska weyn ee Aalfs, Buffalo Alice, Antiques on Fourth Historic, M’s on 4th and SoHo.
Ho-Chunk wuxuu qorsheynayaa inuu dhowro oo dayactiro dhismayaal dhowr ah una abuuro fursado cusub kiraystayaasha ganacsiga iyo kuwa la deggan yahay.